I-China Budweiser neon sign ngezifiso-MY0168 Ukukhiqiza neFektri | UMeiyi
usayizi: 75x25CM, eyenziwe ngokwezifiso Umbala we-Bulb: obomvu, omhlophe
1. Led backlit noma edgelit
2. Kugcine amahora angaphezu kwama-60000
3. Kungaba okuqinile noma ukugqwayiza
4. Hang ngamaketanga noma odongeni
5. I-Voltage: Ukufaka: 100-240V ~ 50 / 60HZ Okukhiphayo: 12V 2A
6. Ukusetshenziswa kwamandla: 24W
7. Kunikezwe ngokuzithoba nangokuziqhenya, ngezimpawu ze-neon ezisezingeni eliphakeme kanye nesevisi enhle kakhulu yamakhasimende asekhaya. Kakhulu onesibopho, kulula ukuxhumana ngezingcingo nange-imeyili.
8. Kwenziwe amaqembu aphezulu abangochwepheshe. Ihlolwe kahle, ikhwalithi iqinisekisiwe, iwaranti yonyaka ongu-1, elungele u-110v ~ 220v emazweni amaningi.
9. Ukushisa okuphansi, ukuvikeleka okuphezulu, ukusebenzisa amandla kakhulu nokuqina. Izibani zepulasitiki zepulasitiki, izimpawu ze-LED. Umsebenzi ohlukile futhi omuhle kakhulu. Ibalabala futhi Iyathandeka!
10. Imibala egqamile kakhulu. Ikhwalithi enhle kakhulu, intengo enhle kakhulu isibonakaliso se-Wonderful AD nesipho! Kuhle kakhulu ukubonisa esitolo sakho, ibha, inkantini, iklabhu, indawo yokudlela, igumbi nanoma ikuphi lapho uthanda khona.
11. Uma ufuna i-Custom Design, vele ungitshele ukuthi ufunani. Okunye ukwakheka kwephethini sicela uvakashele eminye imikhiqizo yethu.
Isipho Omkhulu othandekayo wakho! Kuhle kakhulu ukubonisa emabhaweni, ezitolo, ezinkantini, emihumeni yamadoda, emagaraji, ezindlini zamachibi, emakilabhini, ezindlini zokuphumula, emigodini, ezindaweni zokudlela, emagumbini omdlalo nanoma yikuphi lapho uthanda khona.
Ngeminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni, izimpawu zeLamazo azisebenzisi nje kuphela ubuchwepheshe bokuqoshwa komugqa wendabuko noma ubuchwepheshe bokuqopha i-laser, izimpawu zethu zokukhanya ziqoshwe ngobuchwepheshe bamuva be-3-Dimension, surface, kanye nolayini, okwenza izimpawu zibukeke zihluke impela! Jabulisa Amehlo Akho! Khanyisa Ukuphila Kwakho! Jabulela Izimpawu Zokukhanya zeLamazo!
Okusha sha Akukaze Kusetshenziswe! Ukufaka okulula nokususa. Uphawu Oluhamba phambili lweLamazo Lokungena Endlini Kuphela.
Izinto: Ikhwalithi ephezulu ye-Acrylic Plastic, i-Aluminium tube ne-LED. Iphakheji lifaka i-Chain yokulenga odongeni. Ukukhanya kweNeon kuhlala amahora angama-90,000-120,000!
I-Voltage: 110-240 V. I-US Plug: (I-United States, iBrazil, iCanada, iJapane, Amanye amazwe). I-Plug yase-UK: (i-United Kingdom). I-AU Plug: (Australia, New Zealand). I-plug ye-EU: (I-Argentina, iChile, Amazwe aseYurophu).
Izimpawu zeLamazo ziqoshwe ubuchwepheshe bokudweba be-3D bamuva, i-Surface ne-Line (buheha kuzo zonke izinkomba). Asisebenzisi indlela yokuqopha i-laser enikeza kuphela ukusebenza komphumela we-2D
Umhlobiso omuhle kubha yakho, umgodi, igalaji, igumbi, indawo yokudlela, umhume womuntu njll.
Langaphambilini Dlulisa igama elibomvu lophawu olubomvu nomngcele oluhlaza-MYI005
Olandelayo: Isibonakaliso seCoca cola neon ngokwezifiso-MYI010
Ukugqama okuphezulu kuvulekile okucacile kwe-Acrylic LED N ...
Nezimo Acrylic Ukukhangisa Ibha Ukusebenza LE ...
Isibonakaliso se-Neon eqoshwe ku-acrylic-20LPS016
Umkhiqizi ngokwezifiso kwaholela ukukhanya ukukhanya ingilazi ne ...
Isiko lokudala liholele ukukhanya kwe-neon sig neon sig ...
Custom acrylic kwaholela neon flex strip 12V logo sig ...